အပိုပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်စားသုံးသူများ - WorldRef
အကြီးမားဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်း စက်မှုအပိုပစ္စည်းများ & စားသုံးမှုအရင်းအမြစ်ရန်
စက်ရုံအပိုပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများအတွက်သင်၏တံခါးဝတွင်ရရှိနိုင်စေရန်အတွက်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်။ တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လုပ်ငန်း ၂၅ ခုကျော်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
One Stop ဖြေရှင်းချက်
သင့်ရဲ့တံခါးခြေလှမ်းမှာကိုအပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုရယူပါ။ ယခုအခါနိုင်ငံပေါင်း ၆၅ နိုင်ငံတွင်အမှုဆောင်နေသည်။
နိုင်ငံတကာအာမခံချက်များနှင့်အာမခံချက်များအားလုံးနှင့်အတူအရည်အသွေးအတွက် WorldRef အာမခံချက်။
အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လျင်မြန်စွာအထူးပြုအရေးပေါ် ၀ ယ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူပါ။
တစ်ခုတည်းသောစက်မှုလုပ်ငန်း ၂၅ ခုကျော်တွင်လိုအပ်သောအပိုပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပါ။
တန်ဖိုးနည်းနိုင်ငံ (LCC) အရင်းအမြစ်
$ 150 ထရီလီယံ
ကမ္ဘာအနှံ့အပိုပစ္စည်းစျေးကွက်သည်နှစ်စဉ် ၆-၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၅၀ ထရီလီယံခန့်ရှိသည်။ (* Patton, 6)
စစ်မှန်သောစက်မှု အပိုပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊
Daily Maintenance Task အတွက်စက်ကိရိယာများ၏လိုင်းတစ်ခုလုံး
သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းတွင် 3D Printed Spares၊
အပိုပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအတန်းအစား၊ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူပါ။ သင်၏ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွယ်ကူစေမည်။
ကမ်းလှမ်းမှုနှိုင်းယှဉ်ညှိနှိုင်း & နေရာအမိန့်။
WorldRef Global Seller အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်၏အထောက်အထားများကိုပေးပါ။
WorldRef ၏ ၃၆၀ ဒီဂရီပံ့ပိုးမှုစနစ်ဖြင့်အမိန့်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဝယ်ယူသူများအား WorldRef ၏ International after-sales support ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ B2B ပြုလုပ်ခြင်း အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ စီးပွားရေးကျနိုင်သည်
၂၆.၁၉% သောသူတို့သည်စက်ကိရိယာပျက်ကွက်မှု (မှန်ကန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု) ပြီးနောက်မှသာအရေးယူဆောင်ရွက်ကြပြီး၊ (* စက်မှုဇုန် ၄.၀၁၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ဆက်စပ်မှုတွင်အပိုပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု)
ကျွန်ုပ်သည် WorldRef ထံမှကျွန်ုပ်တောင်းဆိုချက်အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လည်ဖြေကြားရန်မျှော်လင့်ပါသနည်း။
နာရီအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏သဘောတူညီမှုမန်နေဂျာထံမှသင်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုသည်တစ်ပတ်မှ ၁ ရက်မှ ၁ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်လိုအပ်ချက်များ၏အရေးတကြီးညွှန်ပြရန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူပေးပို့အချိန်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အာမခံသည် WorldRef တွင်ကျွန်ုပ်ဝယ်သောအပိုပစ္စည်းများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, ရောင်းသူအာမခံနှင့်အစားထိုး WorldRef ကရောင်းချအားလုံးထုတ်ကုန်အပေါ်သက်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူထောက်ပံ့ရလိမ့်မည်။
သေချာသည်မှာ၊ မည်မျှကြီးမားသည်ဖြစ်စေရှုပ်ထွေးမှုသည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်၊ အကောင်းဆုံးနှင့်မြန်ဆန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။ ကျေးဇူးပြု သင့်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ.
ငွေပေးချေမှုအပြည့်အဝ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောများအတွက်အတည်ပြုအမိန့်, ဖျက်သိမ်းမရပါ။ သင့်တွင်မကျေနပ်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ.
သငျသညျအပိုပစ္စည်းများ, စားသုံးသူနှင့် tools များအရင်းအမြစ်နိုင်သည့်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် application ကိုအဆုံးစာသားရှိပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏တံခါးအဆင့်သို့ရောက်အောင်ပို့နိုင်သည်။
ငါအချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုတင်သွင်းချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအကောက်ခွန်နှင့်သွင်းကုန်များ၏အတားအဆီးများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ချင်ကြဘူး။ သငျသညျစိတျအပိုငျးမြားတံခါးကိုပေးပို့နိုင်ပါသလား?
သေချာသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သွင်းကုန်လိုင်စင်မရှိသော ၀ ယ်သူများအတွက်တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းသို့မဟုတ်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများမလိုချင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စသည်တို့ကိုသင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်း၊ သင်၏တံခါးဝ၌ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်ပါ။ ငါတို့နှင့်စကားပြောပါ ပိုပြီးအဘို့။